Nato oo lagu booriyey in ay baadhitaan ku samayso duqaymihii ay dadku ku dhinteen ee dalka Libya. – Radio Daljir
Nato oo lagu booriyey in ay baadhitaan ku samayso duqaymihii ay dadku ku dhinteen ee dalka Libya.
London, May 14 – Ururka xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku booriyey gaashaanbuurta Nato in ay si buuxda u daba gasho dadkii ku dhintay duqaymihii dhinaca cirka ahaa ee gaashaanbuurta Nato ka geysatay dalkaasi Libya sanadkii hore.
Human Rights Watch ayaa rumaysan 72 oo rayid oo lagu dilay dalkaasi Libya ay tahay in massuuliyada dilkooda ay qaadaan gaashaanbuurta Nato.
Nato ayaa ku adkaysanaysa in ay si aan hore loo arag u yaraysay qasaaraha dadka rayidka ah, waxana ay ku doodeysaa in aanay qaadayn massuuliyada madaama aanay joogin dhulka si ay u xaqiijiyaan wararka sheegaya dhimashada dadka rayidka ah.
Sanadkii hore diyaaradaha dagaalka ee gashaanbuurta Nato ayaa qaaday 9,658 weerar oo duqaymo ah oo lagu bartilmaameedsanayey ciidamadii daacadda u ahaa hogaamiyihii hore ee la dilay ee dalka Libya Col Gaddafi.
Bishii hore ee march ururka cafiska caalamiga ah ee Amnesty International ayaa sheegay in uu diiwaangeliyey 55 qof oo ku dhintay duqaymihii gaashaanbuurta Nato, waxana ururku uu intaasi ku daray in 16 carruur ah iyo 14 haween ah ay ka mid ahaayene tirada dhimashada ee ay diiwaangelisay.
Ururada xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in ay si weyn uga niyad jabeen sida ururka isbahaysiga waqooyiga badda Atlaantikada ee Nato uu uga caga-jiiday in baadhitaan uu ku sameeyo xaaladaha dhimashada ah ee laga soo weriyey duqaymihii ay geysteen diyaaradahooda dagaalka.
Xilligii uu socday dagaalkii awoodda laga tuuray Col Gaddafi ayaa dalkaasi Libya waxaa ku dhintay kumanaan qof oo rayid ah oo qaarkood si ula kac ah loo bartilmaameedsaday, iyadoo arrintaasina ay noqonkarto denbi dagaal.